Resaka nibirioka - ewa.mg
News - Resaka nibirioka
Naneho fialan-tsiny, tamin’ny tsy fahatomombanan’ny fampitana mivantana ny matso teny Mahamasina, tao amin’ny fahitalavi-pirenena (Tvm) ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina, amin’ny maha mpiahy mivantana azy ireo ny Ortm. Manameloka tanteraka ny “teny manavakava-bolon-koditra” nataon’ny mpanao gazety nitantara mivantana ihany koa ny minisitera ary
milaza fa efa nandray fepetra mifanaraka amin’izany.
L’article Resaka nibirioka est apparu en premier sur AoRaha.
Literatiora – Vahela: “Mba artista ihany koa ny mpanoratra”
Tra-pahasahiranana avokoa ny rehetra, amin’ny ankapobeny. Ao ireo minia mangina, ao koa ireo milaza ny hetahetany. Eo am-piketrehana ny boky “Besisika” iarahana amina mpanoratra hafa i Vahela, saingy noho ity valanaretina ity dia mbola tsy tontosa izany…Mihantona avokoa ny zava-drehetra, indrindra eo amin’ny sehatry ny zavakanto malgasy noho ny valanaretina covid-19. Raha tsy afaka mampiseho ny talentany ny hafa, ny mpanoratra ihany koa tsy mahatafavoaka boky. Anisan’izany Rakotondramanana Hasina Vahela Michel, fantatry ny maro amin’ny hoe i Vahela, eo amin’ny tontolon’ny haisoratra malagasy, indrindra amin’ny fitetezana sekoly maro any amin’ny faritra Ambatondrazaka sy Tanambe miaraka amin’ny Faribolana Sandratra « Mitory ny literatiora ».Olon’ny fiarahamonina, andairan’ny fahasahiranana samihafa manoloana izao hamehana ara-pahasalamana izao ny mpanoratra, na dia tsy be teny firy aza fa miandry izay mety hataon’ny fanjakana. “Amin’ny ankapobeny, ny mpanoratra, mizara am-pitiavana ny sanganasany eny rehetra eny. Tsy mitaraina firy amin’izay fotoana laniny, satria efa vonona hizara maimaim-poana ny zavakanto ataony ho an’ny taranaka malagasy. Na izany aza anefa, tokony hojeren’ny fanjakana manokana ihany koa ny mpanoratra, indrindra amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Mba “artista” ihany koa ny mpanoratra, samy mpanao zavakanto, nefa mahatsapa ho ankilabao ihany manoloana ny fanampiana isan-karazany ataon’ny fanjakana”, hoy i Vahela.Ny hampiroborobo ny literatiora sy ny hitaomana ny olona bebe kokoa ho liana amin’ny zavakanto vita amin’ny teny ary hanaparitaka ny asa soratra malagasy maneran-tany no tanjony eo amin’ny tontolon’ny haisoratra, araka ny nambaran’i Vahela. Efa namoaka boky maro niarahana tamin’ny Faribolana Sandratra Ambatondrazaka rahateo ny lehilahy, raha tsy hilaza afa-tsy ny “Toro hisatra”, ny “Antsabo” ary ny “Tangerina”… Na eo aza ny hamehana, mbola mahasoratra ny vetsovetsom-pony hatrany ny mpanoratra.Narilala L’article Literatiora – Vahela: “Mba artista ihany koa ny mpanoratra” a été récupéré chez Newsmada.
Ankazobe: zazavavy 12 taona maty nisy nanolana
Zazavavikely vao 12 taona no hita faty tao anaty ala iray anatin’ny tanànan’Amboniavaratra fokontany Ankazobe II, kaominina ambanivohitra Ankazobe, afakomaly, tokony ho tamin’ny 10 ora maraina. Tsy hitan’ny fianakaviany io ankizy io, nanomboka ny alin’ny 24 marsa lasa teo ary nifampitadiavana. Ny ampitson’io andro io, araka izany, nanao hetsika fikarohana ny fokonolona teo an-tanàna. Nahitam-bokany izany satria hita tao anaty ala iray tsy lavitra ny tanàna ilay zazavavy, efa tsy nisy aina intsony anefa ny tenany ka nampandre aingana ny zandary tao an-toerana ny nahita ny razana. Nandritra ny fizahana ny vatana mangatsiaka no nahalalana fa niharan’ny fanolanana ilay ankizivavy. Tsy fantatra izay nahavanona ny loza ary an-dalam-panaovana ny fanadihadihana ny mpitandro filaminana. Efa natolotra ny fianakaviany kosa ny nofo mangatsiakan’ilay zazavavikely.Tsiferana RandriatianaL’article Ankazobe: zazavavy 12 taona maty nisy nanolana a été récupéré chez Newsmada.
Nampanatonina vahoaka ny fitiliana: mitombo isan-taona ny olona vaovao mitondra ny VIH/Sida
Tao anatin’ny telo taona nisesy farany, nitombo hatrany ny isan’ny olona vaovao voatily fa mitondra ny tsimokaretina VIH/Sida teto Madagasikara, araka ny nambaran’ny sekretera mpanatanteraka ny vaomiera miady amin’ny VIH/Sida, Rasoanarivo Jasminah, ny herinandro lasa teo teny Anosy. 2 200 ireo voatily fa mitondra ny tsimokaretina ny taona 2020 raha 1779 izany, ny taona 2019. Tsy mbola maro ny mararin’ny Sida voatery miditra hopitaly noho ny aretina mpanararaotra hafa mahazo azy fa misoko mangina ny aretina. Isan-taona, 500 000 ny fitiliana vita nefa vitsy ny olona vaovao voatily fa mitondra ny tsimokaretina. Tombanana ho 44 000 ny isan’ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH/Sida eto amintsika, araka ny kajikajin’ny Firenena mikambana ONU/Sida. Miara-miasa ny minisiteran’ny Fahasalamana sy ny vaomiera manokana CNLS sy ny mpiray ombon’antoka toy ny PSI Madagascar ka nampanatonina ny vahoaka ny fitiliana.Nametraka tetikasa nanomboka ny taona 2018 ary naharitra roa taona ny telo tonta hanatsarana ny paikady fiarovana tamin’ny tanàna 42. Tao anatin’ny enim-bolana faran’ny tetikasa; 43 700 ny fitiliana vita ka 573 ny olona voatily fa mitondra ny tsimokaretina. Nampiasaina ny fitiliana teny ifotony miaraka amin’ny mpanentana olon-tsahala sy ny ONG samihafa ary hita fa mahomby, hoy ny solontenan’ny PSI Madagascar, i Daniel Crapper.Vonjy A. L’article Nampanatonina vahoaka ny fitiliana: mitombo isan-taona ny olona vaovao mitondra ny VIH/Sida a été récupéré chez Newsmada.
Noporofoin’ny vadin’ny filoha, Rajoelina Mialy, tetoToamasina, fa ny fandraisan’ny vehivavy anjara amin’ny famokarana no tokony hatao zava-dehibe raha tiana handroso ny firenena. Nitsidika ny tany an-toerana ity filoha nasionalin’ny fikambanana Fitia ity, omalyalatsinainy. Niara-namboly hazo fihinamboa toy ny mapaza, ny voatsokina ary ny anana niaraka amin’ny vondrom-pikambanana “Vehivavy miketrika”, tarihin’i Sabotsy Alphonsine; tetsy Mangarano, ny tenany tamin’izany. Nambaran’ireto vehivavy ireto fa afaka namorona fomba fitadiavam-bola ny renim-pianakavina isakyny fikambanana nisy azy tany nandritra iny fihibohana. “Tapaka karama sy fitadiavam-bola ny ankamaroany. Hitan’ny ONG St Gabriel izany ka notohanany tamin’ny alalan’ny “La Fabrique”, nanome ny tantsoroka rehetra, nahatongavana amin’izao”, hoy izy ireo.Fampidiram-bola ao an-tokantranoTafiditra amin’ny fandraisana andraikitry ny vehivavy amin’ny fampidiram-bola ao an-tokantrano izany, araka ny nambaran’ny filohan’ny “Vehivavy miketrika” hatrany. Niroso tetsy amin’ny Chambre des metiers, ivontoerana ahitana ireo rehetra momba ny asa tanana ataon’ny vondrom-pikambanam-behivavy eto Toamasina ny rehetra taorian’ny fambolen-kazo. Notanterahina tamin’izany ny nanoloran’ny vadin’ny filoham-pirenena ireo fitaovana hanodinana ireo voankazo ho ranomboankazo, azo tahirizina ka hanatsara ny fidiram-bolan’ireo renim-pianakaviana.SajoL’article Tolotra avy amin’ny vadin’ny filoha, Rajoelina Mialy: nahazo fitaovana ireo “Vehivavy miketrika” ao Toamasina a été récupéré chez Newsmada.
Fisehagna : Dernier jour de fête pour les nordistes Antakarana
Les Antakarana se sont donné rendez-vous à Ampasinantenina à Ambilobe depuis le jeudi 12 août 2021 pour assister au bain royal de purification ou Fisehagna. Selon le gouverneur de la région Diana, Daodo Arona Marisiky, qui était présent sur les lieux, cette tradition est effectuée tous les ans durant le mois d’août, tout simplement parce que cette période est considérée par les Antakarana comme sacrée et permet de construire durablement. Les Antakarana sont actuellement par milliers sur les lieux pour honorer le Roi Issa Tsimaro III, qui va invoquer les grands esprits à travers le culte de possession « Tromba ». Les festivités dans la commune d’Antsohimbondrona prennent normalement fin aujourd’hui, samedi 14 août 2021. Anja RANDRIAMAHEFAL’article Fisehagna : Dernier jour de fête pour les nordistes Antakarana a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Ny itsitokotokoan’ny loha, hono, samy manana ny heviny. Tsy efa mba samy naneho ny heviny ve, ohatra, ireo mpifidy vaventy solontenan’ny vondrombahoakam-paritra tamin’ny fifidianana loholona farany teo? Eny, na nifandroritana be ihany aza ny hoe tsy fahafenoan’izy ireo. Samy mbola tokony hofidina izay ho mpitantana ny eny anivon’ny faritra sy ny faritany. Toy izany izay ho mpanolotsain’izy ireo avy. Nefa izay eo aloha no mpifidy vaventy hatramin’izao, araka ny fanazavan’ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana izay.Mila ampandehanina ny raharaham-pirenena, tsy miandry izay tsy afaka na tsy te handeha. Vita iny ny fifidianana loholona; ny sisa, manaraka ihany. Hijoro ny Antenimierandoholona vaovao. Mazava ny fananan’ny fitondram-panjakana maro anisa amin’izany. Toy ny eny anivon’ny Antenimierampirenena ihany. Handeha amin’izay ny fanaovan-dalàna: tsy ahina hisy sakantsakana intsony? Eo koa ny fanaraha-maso ny asan’ny mpanatanteraka, ny fitondrana ny hetahetan’ny vahoaka ifotony sy ny vondrombahoakam-paritra… Na izany aza, tsy anaovana kiantranoantrano ny raharaha.Inona indray àry ny mety ho sakana amin’ny asa fampandrosoana, raha ny lafiny politika, ohatra? Na eo aza izay hoe mpanohitra, ho tonga hatraiza amin’ny heviny sy ny heriny? Eny, na ny fombany sy ny tanjony aza… Tsy efa mahazatra hatramin’izay? Manohitra izay mitranga sy atao rehetra. Tsy hoe maninona na fanaovana zinona izany fa ny fitondram-panjakana no mila mampiseho fahombiazana sy tanjaka amin’ny asa vita. Miankina aminy ny ho fandehan’ny raharaha amin’izao. Iza na aiza amin’ny vahoaka mbola ho azo na hanaiky sy hahazaka korontana politika?Fanapahan-kevitra ny tsy fandraisana anjara nataon’ny mpanohitra tamin’ny fifidianana loholona farany teo. Tsy manoatra lavitra noho izany ve ny tamberin’andraikitra amin’ireo olom-boafidy… maro anisa mitovy fijery? Tsy hoe manjaka tokana fa tomponandraikitra manontolo amin’izay ho fanapahan-kevitra sy izay ho vokany… hotsarain’ny tantara. Hanao ahoana? Ho hita eo…Rafaly Nd.L’article Maro anisa… tomponandraikitra a été récupéré chez Newsmada.
Tompondaka D1 Analamanga: lavon’ny CFFA tamin’ny isa 3 noho 2 ny CosPN
Resin’ny CFFA Andoharanofotsy tamin’ny isa 3 no ho 2 ny ekipan’ny CosPN, ny Polisim-pirenena, omaly tetsy amin’ny kianjan’ny Elgeco-Plus. Niady tanteraka ny lalao ka nanokatra ny isa ny Polisim-pirenena tamin’ny alalan’ny baolina matin’i Mamitiana teo amin’ny minitra faha-18. Nanosika mafy ny zandrikelin’ny CFFA ka sahalan’i Bertho teo amin’ny minitra faha-35 ny lalao. Nitsimbadika ny vokatra taorian’izay ka nitarika tamin’ny baolina novonoin’i Thiardo indray ny ekipan’Andoharanofotsy teo amin’ny minitra faha-76. Tsy nanaiky lembenana, tetsy ankilany, ny CosPN, nanakobana fanindroany ny harato teo amin’ny minitra faha-92 izy ireo ka nahasahala ny isa. Tamin’ny alalan’ny fanalavam-potoana kosa no nahitan’ny ekipan’ny CFFA ny baolina fahatelo matin’i Baggio tamin’ny lohany teo amin’ny minitra faha-119.Tsiferana R.L’article Tompondaka D1 Analamanga: lavon’ny CFFA tamin’ny isa 3 noho 2 ny CosPN a été récupéré chez Newsmada.